Isandi somculo: Yenza iNdwendwe kwiPodcast yakho kwiLifu | Martech Zone
Ukuba ukhe wafuna ukwenza ipodcast kunye nokuzisa iindwendwe, uyazi ukuba kunokuba nzima kangakanani. Ngoku ndisebenzisa i-Zoom ukwenza oku kuba banikezela ukhetho lweendlela ezininzi xa urekhoda… ndiqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukuhlela umkhondo womntu ngamnye ngokuzimeleyo. Kusafuna ukuba ndingenise iitreyini zomsindo kwaye ndizidibanise ngaphakathi kweGarageband, nangona.
Namhlanje bendithetha nomntu endisebenza naye UPaul Chaney Ukwabelana ngesixhobo esitsha kunye nam, Isandi somculo. I-Soundtrap liqonga le-Intanethi lokuhlela, ukudibanisa, kunye nokusebenzisana kwisandi- nokuba ngumculo, ukubalisa amabali, okanye naluphi na uhlobo lokurekhodwa komsindo.
Isandi sabathengisi beendaba
Isandi sesandi Isisombululo selifu apho unokurekhoda khona i-podcast yakho, mema iindwendwe ngokulula, uhlele ii-podcast zakho, kwaye uzipapashe zonke ngaphandle kokukhuphela kunye nokusebenza ngaphandle.
Iimpawu zesandi sePodcast Studio
Iqonga linalo iqonga ledesktop elinikezela ngezinye zeempawu ezongezelelweyo.
Hlela ipodcast yakho ngokukhuphela -Iqonga ledesktop yesandi esinomhleli osemgangathweni kodwa bongeze ukuguqulelwa okuzenzekelayo- into enobuchule yokwenza kube lula ukuhlela ipodcast yakho njengoko ubuya kuba luxwebhu lokubhaliweyo.
Mema kwaye urekhode iindwendwe zepodcast -Kuba intsebenziswano ibibalulekile xa kuyilwa i-Soundtrap, ungamema ngokulula iindwendwe zakho kwiseshoni yokurekhoda ngokuthumela ikhonkco. Nje ukuba bangene, ungabanceda ukuseta iaudiyo yabo kwaye ukurekhoda kungaqala! Akukho mfuneko yokuba babhalisele ukumenywa.
Ngenisa iaudiyo kunye nokukhuphela kwiSpotify -Esi sisixhobo esikukuvumela ukuba ulayishe zombini ii-podcast kunye neempendulo ngqo kwiSpotify, ukonyusa ukufunyanwa kwepodcast yakho.
Yongeza umculo kunye nezandi -Yila eyakho jingle kwaye ugqibezele imveliso yakho ngezandi ezivela kuyo Freesound.org izixhobo zomsindo.
Qalisa uvavanyo lwakho lwasimahla lwenyanga e-1 lweStrap
tags: ukusebenzisana komsindoukuhlela audioUmhleli weaudiohlela umsindoundwendwe podcastpodcastumhleli wepodcastipodcast jingleUkubhalwa kwepodcastii-saasiziphumo zomsindoIngoma yesandiHilltownababalisi
I-Alteryx: Iqonga leNkqubo yokuZenzekelayo (i-APA) yeQonga